Mbola kely aho, dia efa nitady an’Andriamanitra
"Fa efa tonga ny Zanak’olona (Jesosy) hitady sy hamonjy ny very." Lioka 19:10
«Fony kely aho dia efa nino an’Andriamanitra, saingy tsy tena nahafantatra Azy. Sarotra ny fahazazako sy ny fahatanorako: nisaraka ny ray aman-dreniko, ary tao an-trano aho dia matetika no niafina nitomany. Indraindray aho, tao an’efitranoko, dia nivavaka tamin’Andriamanitra mba homeny fifaliana. Niala tao an-trano aho raha vao feno 18 taona, tsy nanana na ariary aza. Nandritra ny volana nifanesy, dia namana maromaro no nampiantrano ahy. Isaky ny faran’ny herinandro aho dia nandeha nilanonana, ary nanao zavatra tsy dia mety loatra, mba handosirako ihany koa ny alaheloko. Taorianan’izany aho dia nifanena tamina tovolahy iray. Nampiantrano ahy izy, rehefa nanaiky izany ny reniny. Saingy nanao fanompoana fanahy hafa io vehivavy io, ka tsy azoko ny aiko, ary dia lasa aho nandeha. Roa taona taty; aoriana aho dia nifanerasera indray tamin’io vehivavy io. Tsy fantatro intsony izy, satria niova tanteraka. Noresahiny ahy ny momba an’i Jesosy sy izay nataon’i Jesosy taminy. Ary nanohina ahy fatratra izany. Fa nandritra ny famelabelarana kristiana iray, fotoana vitsivitsy tat&ygrave; aoriana, no ninoako ny Tompo Jesosy. Nitomany be aho tamin’izay, ranomasom-pifaliana, ranomasom-pitoniana.
Namaly ireo vavaka nataoko fahazaza Andriamanitra. Nitady Azy aho, dia tonga Izy nanatona ahy. Nanafaka ahy Jesosy, nanasitrana ny ratram-poko, nampianatra ahy hamela heloka. Marina fa mandalo «tany hay» aho indraindray, kanefa miaraka amiko ny Tompo.
Raha mahatsiaro ho very ianao, tsy mahafantatra izay tokony hizorana, dia tsy izay olona manoloana anao tsy akory no hahita vahaolana ho anao. Jesosy irery ihany no mahay manao izany!»